Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. एनसेल कर प्रकरण : सडकदेखि सदनसम्म चर्चा – Emountain TV
एनसेल कर प्रकरण : सडकदेखि सदनसम्म चर्चा
काठमाडौं, २६ भदौ । एनसेल प्रकणले अहिले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाएको छ । एनसेलले लाभकरवापत सरकारलाई तिर्नु पर्ने या नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सर्वाेच्चबाट फरक समयमा फरक फरक फैसला आयो ।
कहिले एनसेलले लाभकर वापतको रकम सरकारलाई तिर्नु पर्छ भन्ने फैसला गर्यो त कहिले त्यसवापत अनुसन्धान बाँकी भन्यो । सदनमा न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको बेला नेपाल बार एशोसियसनले भने कर प्रकरणमा छानबिन समिति नै गठन गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
त्यहि अनुरुप नै संविधानमा सर्वाेच्च अदालतको विषयलाइलाई ध्यानमा राखेर संसदमा समेत बहस गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १२६ को उपधारा २ र १२८ को उपधारा ४ले सम्मानित अदालतले आदेश फैसलाहरु कानुन सरह मान्य हुन्छन र त्यो सबैले पालना गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्ांविधानको धारा १०१ मा यदि अदालतको वा न्यायाधीशको फैसला चित्त बुझेन भने महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ ।
संसदको शून्य समयमा, वा अन्य कुनै पनि समितिमा अथवा सडकमा नै किन नहोस छलफल गर्न पाइँदैन । यसले अदालतमाथि आक्रमण हुन्छ । अदालतको स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण हुन्छ । एनसेलको ३९ अर्ब लाभकर विवाद प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब लाभकर बापतको रकम सरकारलाई तिर्न बाँकी भनी सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
तर सर्वाेच्चले त्यो रिट नै खारेज गरेपछि यो विषयमा अहिले संसद र संसदीय समितिमा छलफलको विषय बनिरहेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुल्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको वृहत पुर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
जसको चौतर्फी टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । २०६३ को संविधानको दोस्रो संशोधनमा न्यायाधिश माथि पनि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था संविधानले ग-यो । त्यहि व्यवस्था २०७२ को संविधानमा पनि आउनाले न्याय परिषदको संरचनामा राजनितिक दलको बाहुल्यता बढेको छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनितिको प्रभाव पाइन्छ । जसका कारण न्यायपालिका छायाँमा पर्दै गएको छ । एनसेल प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तो किसिमको विवाद विगतमा नदोहोरीएको भने होइन ।
यस अघि पनि सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की माथि पनि महाअभियोग लगाइएको थियो । अदालतको फैसला मन नपर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पुनराअवलोकन गर्न सकिन्छ तर निति नियम नै मिचेर सदनदेखी सडकसम्म अदालतको आचार संहिता नै मिचेर विरोध गर्न भने कत्तिको पाइन्छ ? कानूनी प्रश्न कानून बनाउने सांसदहरुमाथि नै उठेको छ ।